Ihe nkwụnye ọkụ na mpụga Gdị G - ndị na-agbasa mgbasa ozi maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
A na-ejikarị ụdị G na United Kingdom, Ireland, Saịprọs, Malta, Malaysia, Singapore na Hong Kong. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na-eji ụdị G)
Ihe nkwụnye 13 a nwere amp nwere akụkụ anọ nke na-etolite triangle isosceles. Ntụtụ etiti ụwa bụ 4 site 8 mm na 22.7 mm ogologo. Ahịrị na ahịrị na anọpụ iche bụ 4 site na 6.35 mm na 17.7 mm ogologo, na etiti ndị gbara oghere 22.2 mm. Oghere dị n'etiti etiti mkpụrụ etiti na etiti etiti ahịrị ahụ na-ejikọ ike abụọ ahụ bụ 22.2 mm. Ejiri aka mkpuchi ogologo 9-mm na-egbochi ịkpọtụrụ onye na-ejikọta ihe na-enweghị nsogbu na ntinye aka mgbe ọ na-abanye plọg.
British Standard BS 1363 choro ka ijiri eriri waya mapu ma okpukpo okpukpo kporo oku maka njikọta abuo. Ngwa ihe eji eme oku abuo abughi nke eji ebu ihe ma obu otutu ihe eji achapu plastik. Enweghị ụdị ntụtụ ụwa dị ka a ụdị C plọg na-eme ka ọ ghara ikwe ijikọ ya na ụdị nnabata nke G, ọ bụ ezie na enwere ike ịmanye ya na oghere ahụ site na ịrapara otu ihe dị na etiti etiti nke ike ahụ, nke na-emepe oghere abụọ ndị ọzọ. Iji doo anya nke ọma, nke a abụghị otu ndụmọdụ; ọ bụ naanị nyocha!
Na UK, a na-ejikọ ike sotọ n'ụlọ okirikiri mgbanakanke 32 Ndị na-ahụ maka sekit na-echebe. A naghị ejikarị ụdị ụdị ikuku a na mpụga UK ma chọọ ojiji gwakọtara plọg. Obere ngwa, dị ka chaja ekwentị, na-enwe faizik 3 Apọkasị n'ime flọg; ngwa ọrụ dị arọ, dịka ndị na-eme kọfị, nwere plọg nwere fum katiriik 13 am. Fọrọ nke nta n’ebe niile n’ụwa radial okirikiri eji. N'ime usoro a, sọks mgbidi ọ bụla, ma ọ bụ ìgwè nwere soki, ya na sekọndrị nke sekọndrị nke bụ isi, yabụ na ọ dịghị mkpa ịme ka plọg. Dịka nsonaazụ, ọ bụrụ na iburu ụfọdụ ngwa ọrụ ndị mba ọzọ na UK, ị nwere ike iji ihe nkwụnye ọkụ, mana teknụzụ ọ ga-agbanye ọnụahịa fusez ziri ezi. Ọtụtụ ga - enwe amps 13, buru oke ibu maka kọmputa dịka ọmụmaatụ. Gdị plọg na sọks bidoro pụtara na 1946 ma ebu ụzọ bipụta ọkọlọtọ na 1947. Ka ọ na-erule njedebe nke 1950s, ọ dochiela ihe mbụ ụdị D outlet na plọg (BS 546) na nrụnye ọhụrụ na UK, na njedebe nke 1960s, etigharịrị nrụnye mbụ na ọkwa ọhụrụ. Gdị sọks G mgbidi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gụnyere switches maka nchekwa ọzọ.
Ihe nkwonkwo UK enweghị obi abụọ n'etiti ndị kasị dịrị nchebe n'ụwa, kamakwa n'etiti ndị na-emekọrịta ihe na ndị na-akpata ọgba aghara. Ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji achịkarị ọchị na-ekwu na plọg Britain kacha bu ibu karịa akụrụngwa a na-ejikọ ya na… Ọzọkwa, akwara dị n'okpuru nke plọg ahụ na-eme ka ọ bụrụ ihe zuru oke.